Dhammaan saddexdii gool ee xalay Atletico ku heshay garoonka Anfield waxaa dhaliyey xiddigihii hore ee Kooxda Real Madrid – Gool FM
Dhammaan saddexdii gool ee xalay Atletico ku heshay garoonka Anfield waxaa dhaliyey xiddigihii hore ee Kooxda Real Madrid
(Liverpool) 12 Mar 2020. Kulan adag oo ka tirsan lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League ayaa xalay ka dhacay Magaalada Liverpool, iyadoo Reds oo kulankii hore looga soo adkaaday 1-0, markale looga badiyey 2-3.
Taasi waxa ay ka dhigan tahay in Reds tartanka looga cirib tiray cel-celis ahaan goolal gaaraya labada lugooda 2-4, kooxdii haysatay Champions League ayaana tareenka tartanka xalay laga tuuray.
Haddaba dhammaan saddexdii gool ee ay kooxda Atletico ku dhalisay xalay garoonka Anfield waxaa dhaliyey xiddigihii hore ee Real Madrid.
Saddex gool oo ka yimid labo ciyaaryahan oo horay u soo maray Kooxda Real Madrid ayaa xalay lagu reebay naadigii difaacanaysay tartanka Champions League ee Liverpool.
Llorente, kaasoo soo galay qeybtii labaad ee kulanka ayaa ka faa’iideystay qalad uu sameeyey goolhaye Adrian, goolkaas ayaana soo celiyey rajadii Atletico Madrid, waxaana uu gool kale ku daray siddeed daqiiqo kaddib goolkii hore, taasoo wal-walka ku badisay kooxda reer England.
Alvaro Morata ayaana intii lagu guda jiray ilbiriqsiyihii ugu dambeeyey waqtigii lagu kordhiyey ciyaarta ee extra time-ka kulankan waxa uu dhaliyey goolka saddexaad taasoo macallin Diego Simeone kooxdiisa u dirtay siddeed dhammaadka, isagoo taageerayaasha ka soo safray caasimadda Spain siiyey farxad inay ku damaashaadaan iyagoo ku sugan garoonka Anfield.
20-ka bishii June sanadkii 2019-kii, Llorente ayaa u saxiixay Atlético Madrid isagoo kaga soo dhaqaaqay kooxda carruurnimadiisa ee Real Madrid, waxaana uu kus oo dhaqaaqay heshiis shan sanadood ahaa oo ku kacayayey adduun dhan 35 milyan oo gini.
Dhinaca kale Morata ayaa ka soo bilaabay xirfaddiisa kooxda Real Madrid, kaddib markii uu kula guuleystay Champions League sanadkii 2014-kii, waxa uu u dhaqaaqay Juventsu, waxaana uu dib ugu soo laabtay Madrid ka hor inta uusan ku biirin Chelsea.
Bishii Janaayo sanadkii 2019-kii ayuuna Morata heshiis amaah ah ugu soo dhaqaaqay Kooxda Atlético Madrid, waxaana uu heshiis joogto ah ugu biiri karaa naadigan 1 bisha July sanadkan 2020.
Muxuu ka yiri Marcos Llorente guushii ay xalay ka gaareen Liverpool & labadii gool uu ka dhaliyay?